Barium Sulphate, Iron oxide, Iron oxide - Mapara Mahachi
Barium Sulphate, Lithopone, Calcium carbonate, Kaolin, Titanium Dioxide uye Iron oxide
Vakanaka rinorema karusiyamu carbo ...
1250 pajira riya vakanaka kwazvoipita ...
Langfang Pairs Mabhiza Chemakemikari Co., Ltd. ndeimwe yemakuru-akakwana akazara ehunyanzvi pigment yekugadzira zvigadziko muChina. Iri muLangfang Guta pane "Beijing-Tianjin Corridor", iri padyo neJingjintang, ine zvifambiso zviri nyore. Iyo kambani yakavambwa mu1997 uye ndeimwe yemakambani muLangfang Guta ayo anogona kuona nekutengesa zvigadzirwa zvemakemikari. Iyo kambani inoshanda mukugadzira nekutengesa kwe barium sulfate, lithopone powder, kaolin, calcium powder, anatase titanium dioxide, rutile titanium dioxide, iron oxide, kambani ine yakasimba technical technical simba uye yakasimba chigadzirwa kukura kugona.
Nyanzvi yekutsvagisa projekiti timu kune akasiyana vatengi zvinodiwa
Iyo kambani inounza huwandu hukuru hwematarenda, inotsvaga mapurojekiti uye ine basa kune vatengi
Nyowani tekinoroji shanduko maitiro, tsvagisa mhando yepamusoro zvigadzirwa
iyo inogona kushandiswa zvakanyanya mukupfeka, pendi, mapurasitiki, inki, bepa, rabha uye mimwe minda, Uye gadzira zvigadzirwa zvakasarudzika zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Iwo maPairi Mahosi zvigadzirwa zvigadzirwa zvakagamuchirwa zvakanaka nevatengi kumba uye kunze kwenyika.
222020 / Nyamavhuvhu
1. Basa reti titanium yakasviba mumachira .. Kupfeka kwakanyanya kunoumbwa ne ...
Kupatsanura kweCalcium Mota ...
Calcium Carbonate inogona kukamurwa kuita: inorema calcium Carbonate, yakajeka calcium Carbonate, inoshanda calcium Carbonate, flue gasi desulfurization calcium Carbonate, yakanyanya calcium calcium carbonate, nezvimwe. Heavy Calcium Carbonate Chimiro cheinorema calcium mota
1. Calcium powder ye rubber indasitiri Calcium powder ye rubber-rubber: (400 mesh, kuchena: 93%, calcium content: 96%). Calcium powder ndeimwe yemafuta makuru kwazvo anoshandiswa muindasitiri yerabha. Yakawanda huwandu hwecalcium poda izere nemarara ...